Goobaha Ski ee ugu Fiican Colorado! - ULLER
Inaad ka fikirto Colorado waa inaad ka fikirto barafka, barafka iyo barafka badan! Iyo sida? Buuraheeda oo leh fijaanno dabiici ah oo dabiici ah iyo waxyaabo heer sare ah oo la yaab leh, oo ay aad u jecel yihiin dadka jecel barafka, barafka lagu ciyaaro iyo ciyaaraha kale ee barafka.
Hoos ugu dhaadhac dooxyadeeda xawaare buuxagalaan hawada cusub baraf ku leh Colorado waa dareen layaableh. Waxay noqotay waayo-aragnimo ay u xiiseeyeen kumanaan dalxiisayaal ah iyo ciyaartooy booqda sanad walba inay dareemaan deg deg adrenalin ah oo aan la barbar dhigin. Meelaheeda ugu sarreeya, oo ah kuwa ugu sarreeya buuraha Rocky, waxay la mid yihiin hal-abuurka, oo ay tahay in qof kasta oo skier ah uu la kulmo. Diyaar ma u tahay inaad waxbadan kabarato barafkan xiisaha leh? Akhriso oo ogow sida khibrada barafka ee meelaha loo dalxiis tago ee Colorado!
KASHAASH BARNAAMIJYADA CILMI EE COLORADO!
Waa maxay Aspen?
Aspen waa magaalo ku taal Pitkin County oo ku taal gobolka Mareykanka ee Colorado, taas oo u soo ifbaxday mecca barafka kadib Dagaalkii Labaad ee Adduunka markii Shirkadda Aspen Skiing ay bilaabatay. Sanadihii la soo dhaafay, magaaladani waxay noqotay xarun aad muhiim ugu ah isboortiga iyo waxqabadyada dhaqameed ee ku saabsan barafka, iyo sidoo kale ciyaaraha kale ee barafka sida barafka.
Aspen waa sidee
Magaalada Aspen waxay ka kooban tahay afar xarumood oo shaqsiyaad ah in kastoo aysan isku xirneyn, hadana waxay ka kooban yihiin magaalada oo dhan waxayna ka dhigayaan mid ka mid ah meelaha ugu fiican ee lagu ciyaaro barafka, iyadoon loo eegin heerka khibradaada. Sidoo kale micno malahan hadii miisaaniyadaadu aysan aheyn mida ugu sareysa, waxay kuxirantahay dhamaan barafka aad dooratay inaad booqato, iyo xiliga aad aadeyso. Waxaa jira wax qof walba oo magaaladan jooga!
Bixiyeyaasha bilowga ah ayaa hubaal ah inay ka helayaan booska 'Buttermilk' iyo aagga hoose ee saldhigga 'Snowmass'. Kuwa leh heer dhex dhexaad barafka ayaa aad ugu fiicnaan doona inay aadaan 'Highlands' iyo 'Snowmass' meelaha ugu sareeya. Laakiin haddii aad hadda ka hor noqotey xirfadle xirfadle ah oo leh heerar heer sare ah, waxaan kugula talineynaa inaad doorato Buurta AspenKama gudbi kartid weelka saldhigga 'Highlands' in kastoo. Laakiin waxan oo dhan waxaan uga hadli doonnaa si faahfaahsan goor dambe!
NAGU SOO BADBAADI XARUNTA UGU FIICAN ASPEN!
Buurta Aspen (Ajax)
The Saldhigga Aspen waxay ahayd xaruntii ugu horreysay ee barafka lagu ciyaaro magaaladan! Waxaan ka helnay adigaoo ku taal waqooyiga magaalada, oo waxaa lagu gartaa iyadoo la siinayo raadadka dhibka aadka u sarreeya ee khabiirka ugu badan. Dhab ahaan, Buurta Aspen Waa goob dalxiis oo aan lahayn meelo u janjeera bilowga. Waxay ka kooban tahay buuro badan oo dhexdhexaad ah, heer sare ah iyo heerar khubaro ah oo keliya, sidaa darteedna waxay ku dhammaaneysaa inay ahaato xarun baraf lagu ciyaaro oo si caddaalad ah u gaar ah. Buurta Aspen waxay leedahay wadarta 76 raad oo ay kuxiran yihiin tooda wiishashka, saldhigeeduna aad buu ugu dhow yahay magaalada lafteeda. Saldhig la yaab leh oo lagu tijaabiyo xirfadahaaga iyo khibraddaada!
La saldhiga caanahaDhinaceeda, waxay bixisaa inta badan buluug iyo casaan dhaadheer, taas oo ah in la yiraahdo "fudud" iyo "dhexdhexaad", gaar ahaan waxaa lagula talinayaa in lagu bilaabo adduunka barafka, xirfadahaaga dhaqan geli oo ku raaxayso dhammaan adrenalin ee ay tuubooyinka(tuubooyinka khiyaamada) iyo barafka barafka (jardiinooyinka barafka). Naqshadeynta iyo la qabsiga waxay ka dhigeysaa xarun aad loo yaqaan, oo leh fursado loogu talagalay dadka waaweyn iyo carruurta sidoo kale. The saldhiga caanaha Waxaan ka helnay inay ku taal waqooyiga Aspen Highlands, waxayna leedahay joog hooseeya. Waa qabow safar qoys, ma seegi kartid!
Aspen - Buuraha dhaadheer
Waxay ku taalaa Highland Peak iyo Loge Peak (waqooyiga magaalada), Buuraha Aspen Waxay u taagan tahay bixinta barafka buuraha dhaadheer oo leh gaduud casaan iyo madow (laguma talinayo dhexdhexaadiyeyaasha ama bilowga). Waxaa si aad ah u soo booqda wadayaasha doonaya inay carqaladeeyaan dalcadaha dabiiciga ah iyo fijaannada loogu talagalay isboortiga, oo ay ku jiraan Highland Bowl, Olympic Bowl iyo Steeplechase. Haddii khibradaha xad-dhaafka ahi ay yihiin waxaaga, tani shaki la’aan waa meesha kuugu habboon adiga!
Apen - Barafka
Dalxiis barafkan, uoo ku yaal agagaarka Tuulada Snowmass, Waa tan ugu weyn dhammaan magaaladan, waana hubaal mid ka mid ah kuwa ugu caansan dhammaan Aspen. Waxay leedahay habab aad u ballaaran oo raadad ah oo midabbo leh dhammaan heerarka oo dhan. Tani waxay ka dhigeysaa goob barafka lagu kariyo oo aad u fiican dhammaan noocyada barafka, xitaa haddii aad tahay bilow ama booqashada asxaabta iyo qoyska. Si kastaba ha noqotee, waxaad sidoo kale heleysaa meelo aad u sarreeya oo caqabad ku ah kuwa ugu khibrada badan. The saldhig baraf Waxay bixisaa jawi aad u fiican, xulashooyin hoy oo fiican, maqaayado iyo dukaamo aad iibsato. Waxay leedahay wax walba!
Aspen Waxaa loogu talagalay in lagu soo saaro khibrad dhameystiran oo gaar ah oo ku saabsan barafka, taas oo ah meesha ugu weyn ee dalxiiska. Xaqiiqdii, barafku waa meel walba! Intaas waxaa sii dheer, waa goob xarumo ku leh dhammaan baahiyaha soo booqdayaasheeda iyo sidoo kale sababaha safarkooda (xiisaha, qoyska, jacaylka ama barashada). Shaki la'aan, waad booqan kartaa xarumaheeda oo dhan, in kasta oo hubaal inaad horeyba u ogaan doonto midka kuugu habboon adiga iyo asxaabtaada! Xaqiiqdu waxay tahay, Aspen way fiican tahay haddii aad go'aansato inaad u baxdo safar baraf dibadeed fasaxaaga soo socda. Tag!
In saldhigga buurta naxaas, oo ku taal galbeedka Denver (caasimada Colorado), Jawi aad u wanaagsan ayaa ku sugaya adiga oo dalxiisayaasha iyo dadka deegaanku ku raaxaystaan ​​waxqabadyo badan barafka marka lagu daro barafka, kaas oo lagu tababbari karo dalcadaha badan ee midabada iyo heerarkaba. Halkaas waxaad ka heli doontaa 77 sahlan, 50 dhexdhexaad ah iyo 25 raadad adag oo wadar ahaan ah 152 raad oo aad ka heli karto. Weelladooda waxaa aad u doonaya khubarada ugu badan ee isboortiga, oo laga sameeyay inta u dhaxeysa buuraha si dabiici ah, loona habeeyay raaxeysiga. ee skiers, oo leh raadad badan oo ay heli karaan, labadaba lagu tuntay iyo kuwa aan la fuulin
Sababtoo ah waxay ku taal meel 13 mayl u jirta Frisco (oo ku taal Summit County), waxaad dooran kartaa xulashooyin aad ku hoydo magaaladan u dhow.Waxaad qorsheyneysaa inaad jarto miisaaniyaddaada intaad safarka ku jirto. Frisco sidoo kale waxay leedahay ikhtiyaarro dhowr ah oo loogu talagalay madaddaalada dalxiiska oo ay ku jiraan matxafyada, meelaha socodka iyo jardiinooyinka barafka, sidaa darteed waqti aan dheeri aheyn waad caajisi doontaa. Si kastaba ha noqotee, Saldhiga Copper Mountain Waxay leedahay tas-hiilaad madadaalo u gaar ah, hoy iyo makhaayado kaa tagaya wax ka badan intaad la yaabtay, oo loo qaybiyey saddex goobood: East Village, The Village at Copper iyo West Village.
Xusuusnow inaad tixgelisid in dhererka rugtani ay qiyaastii tahay 3.000 oo mitir, marka waa inaad u diyaar garowdaa inaad tan u maleyso oo ha u oggolaan inay ka bixiso xiisaha safarkaaga haddii aad tahay qof bilow ah.
La Saldhigga Dalxiiska Xilliga Jiilaalka, "Colorado ee ugu cadcad" waa jihaysan badanaa loogu talagalay heerarka sare iyo kuwa dhexe ee barafka, inkasta oo ay bixiso fursado raad raadin sahlan oo loogu talagalay bilowga. Beerta Jiilaalka waxaa sifiican loogu habeeyay qaybta 'Continental Divide' iyadoo ku siineysa faa iidada helitaanka iyo kuleylka duufaannada jiilaalka oo kaaga yimaada dhammaan dhinacyadaada. Waa maxay tan? Inay halkaas ku xayiran yihiin oo ay ku dari doonaan lakabyo badan oo baraf ah si ay ugu raaxaystaan ​​dhaadhaca.
Saldhiga, uoo ku taal meel u dhow Jiida Hore (qiyaastii 90 daqiiqo Denver), waxay leedahay seddex meelood oo sare (Jiilaal Jiilaal, Mary Jane iyo Vasquez Ridge) oo isgaarsiiya isla markaana isku xira dariiqyo iyo wiishyo, awood u leh inay qaabilaan in ka badan 10.000 oo qof maalintiiba. Waxa kale oo ay leedahay xulashooyin badan oo hoy ah sida hoyga buurta, hudheelada, iyo guryaha is-kaashatada oo u dhexeeya kuwa ugu jaban illaa kuwa ugu raaxada badan. Yaan lagaa yaabin hadaad hesho qolal iyo qolal qaarkood oo ku qarsoon kaynta magaalada hooseBeerta Xagaaga!
Intaas waxaa sii dheer, in qiime ahaan lagu daray, idaacadda waxaa loo qaabeeyey inay qaabisho dadka qaba nooc kasta oo naafonimo jireed ah, kuwaasoo fursad u haysta inay barashada barafka iyo barafka ku bartaan Xarunta Isboortiga Qaranka ee Dadka Naafada ah (NSCD).
VAIL (WAKIILADA SKI VAIL)
La Saldhigga Goobaha Dalxiiska ee 'Vail Ski Resorts' Waa tan ugu weyn gobolka oo dhan Colorado iyo kan saddexaad ee ugu weyn guud ahaan Mareykanka. Waxaan ka helnay meel ku dhow magaalada Vail, ee Gobolka Eagle. Haddii aad go'aansato inaad booqato dalxiiskan weyn ee barafka, shaki la'aan waxay noqon doontaa mid ka mid ah waayo-aragnimada fasaxa ee ugu layaabka badan ee aad dooran karto. Waxay ku bixisaa wax kasta oo ku saabsan seddexdeeda qaybood: Hore-Side, Blue Sky Basin, iyo Black Bowls. Idaacadda waxay leedahay meelo dhaadheer oo loogu talagalay heerarka horumarsan inta badan, waana sababtaas awgeed khubaro badan oo barafka ah ayaa booqda, laakiin waxay siisaa fursado aad u fiican kuwa dhexdhexaadka ah iyo kuwa bilowga ah ee aan kaa niyad jabin doonin ugu yaraan haddii ay yihiin noocyada dhaadheer.
Intaa waxaa sii dheer, waa xarun leh magaalooyin iyo magaalooyin ku yaal Dooxada Vail oo leh qaab gumeysi aad u qurux badan oo aad hubto inaad ka baxdo. Waxaadna arki doontaa in safarada wax iibsiga iyo cawayska ay runtii yihiin kuwo raaxo leh! Waxa ugu fiican ayaa ah inaad hesho boqolaal ikhtiyaarro hoy ah, oo ay ku jiraan hudheelada, hudheelada, guryaha, qolalka guryaha iyo guryaha is-kaashatada, kuwaas oo la jaanqaadi doona dhammaan miisaaniyadaha iyo dhadhankooda sababo la xiriira fursado badan oo kala duwan, in kasta oo ay run tahay inay ka mid noqon karto xarumaha barafka ugu qaalisan Colorado. Markaa haddii aad fursad u leedahay inaad maal gashato oo aad ku raaxaysato waayo-aragnimadan barafka, markaa hubaal inaadan ka qoomameyn doonin. Haddii aad la socoto a miisaaniyadda xaddidan, ikhtiyaarkaaga ugu fiican wuxuu noqon doonaa inaad joogtid magaalooyinka u dhow saldhigga, kuwaas oo ku dhowaad dhammaan dhowr kiiloo mitir.
Ma ogtahay taas laVail Town lafteeda ayaa la dhisay ka dib markii loo dalxiis tago ciyaaraha barafka ee 1962? Taasi waa sababta ay magaaladu ugu dhowdahay inay si buuxda diiradda u saarto dalxiiska iyo kuwa kaxeeya barafka iyaga booqda. Intaa waxaa dheer, ka Dalxiis Dalxiis Waxay ka kooban tahay 3 xarumood oo kale oo aad u qabow, in kasta oo loo tixgeliyo inay yihiin kuwo madax-bannaan, waxaa ka shaqeeya shirkadda Vail Resorts. Halkan waxaan kaaga tagi doonaa macluumaad yar oo iyaga ku saabsan!
KAALINTA SANADKA KAADHKA
El Dalxiis Beaver Creek Waxaan ka helnay meel aan ka badnayn 20 daqiiqo Vail, oo aad ugu dhow magaalada Avon. Idaacaddani waxay u dhigantaa raaxada dhinac walba, waxaanan u aragnaa inay ka muuqato bakhaaradeeda caanka ah, qolalka farshaxankeeda ee aad la kulanto intaad socoto, iyo guud ahaan jawiga idaacadda oo dhan. Tani waxay ka dhigeysaa mid ka mid ah kuwa ugu raaxada badan, xarrago leh iyo beddelaad gaar ah.
Xaruntan barafka waa mid aad u yar cabbir ahaan haddii aan isbarbardhigno meelaha kale ee dalxiiska deriska la ah, laakiin waa mid aan ka raaxo yarayn oo waasac ah sababtaas. Xaqiiqdii, waxay leedahay buur barafka laga sameeyo oo ka kooban 3 tuulo oo kala duwan. Maskaxda ku hay in inta badan raadadka ay bixiso ay yihiin heerar dhexdhexaad ah, in kasta oo ay bixiso fursado heer sare ah oo loogu talagalay heerarka horumarsan iyo kuwa bilowga ah. Mana seegi kartid barafkeeda barafka cajiibka ah ee cajiibka ah!
BARNAAMIJKA SAYNISKA SARIIRTA
Saldhigga 'Breckenride' waxaa caadi ahaan loogu yeeraa "Breck" wuxuuna ka kooban yahay 5 heer sare ah oo ku baahsan dhammaan Degmooyinka Summit ee Gobolka Summit. Waa mid ka mid ah meelaha loogu dalxiis tago barafka Mareykanka sanad walba. Taasina waa khibrada ka jirta Breckenridge waxay bixisaa jawi ku habboon haddii kuwaaga ay yihiin magaalooyin qurxoon, oo leh meel kale oo lagu dego oo loogu talagalay dhammaan dhadhanka iyo miisaaniyadaha.
Waa dhul baraf baaxad leh oo inta badan leh buuro loogu talagalay khabiir, heerar sare iyo heer dhexdhexaad ah, in kasta oo aad sidoo kale ka heli karto jihooyinka bilowga ah ee dugsiga barafka lagu barto. Intaas waxaa sii dheer, waad ku raaxeysan kartaa jardiinooyinka qaab-bilaash ah kuwa xiisaha badan, oo leh sanduuqyo iyo biraha lagu riixo oo lagu boodbo ceejinta buuxda, oo aad xitaa ku dhex geli karto xirfadle la aqoonsan yahay oo ku tababbaranaya tartankooda soo socda.
Dalxiiskan lagu caweeyo ee cajiibka ah waxaa laga helaa magaalada Keystone ee gobolka Colorado, oo aad ugu dhow Denver. Xarunteedu waxay ka kooban tahay 3 buurood oo ku habboon barafka, inta badanna waxay u janjeeraan heerar heer sare ah iyo kuwo khabiirro ah, in kasta oo ay sidoo kale soo bandhigto xulashooyin heer dhexe ah iyo kuwa bilow ah. The xarunta keystone waxaa si gaar ah ufiican in la booqdo habeen iyo maalin labadaba caanna ah Skilada habeenkii (barafka habeenkii), maxaa yeelay qaar ka mid ah meelaha dhaadheer ee ugu fiican ayaa si gaar ah loogu habeeyay barafka habeenkii. Waa wax aad u fiican!
Goobta loo dalxiis tago ee Keystone Resort sidoo kale waxaad ka heli kartaa xulashooyin layaableh oo ku saabsan maqaayadaha iyo dukaamada Dukaameysiga, iyo waliba kumaan kun oo hoy iyo xulashooyin hubaal ah inay ku habboon yihiin dookhaaga iyo miisaaniyaddaada. Ka kaalay kuwa ugu raaxada badan uguna jaban, guryaha raaxada iyo qiimaha guryaha is-kaashatada buurta.
Sidoo kale, tan dalxiis ski ee colorado waxay bixisaa meelo loogu talagalay fardo fuulista, baarkinka buuraha, koorsooyinka golf-ka iyo meelaha loogu talagalay in lagu bixiyo shirarka. Waxay kaloo leedahay haro u dhow dhawr daqiiqadood uun baa naga xiga, kaas oo marka barafoobay noqda baraf baraf ku socda. Ma seegi kartid iyaga!
Sidoo kale loo yaqaan "The Basin" ama si fudud "A-Basin", ah Arapahoe Basin ski Resort wuxuu ku yaalaa Wabiga Qaranka ee White River Colorado. Waa goob si gaar ah loogu talagalay khabiirka ugu badan ee barafka iyo barafka lagu ciyaaro, tan maxaa yeelay waxay inta badan bixisaa qulqulka heerka sare. Si kastaba ha noqotee, saldhigga waxaad ka heli kartaa xulashooyin dhexdhexaad ah oo dhexdhexaad ah iyo sidoo kale heerar fudud oo loogu talagalay bilowgayaasha iyo kuwa wax barta, kuwaas oo xitaa hela dugsi baraf.
Mid ka mid ah waxyaabaha aad ugu jeceshahay hudheellada Basinku waa inaad kaxaysan karto barafka illaa bilowga Juun, oo xitaa socon kara illaa Julaay sannadaha qaarkood. Taasi waa sababta munaasabado badan ay albaabadeeda u furto saddex bilood ka dheer idaacadaha kale.
Haddii aad rabto inaad ku soo booqato safarkaaga xiga ee barafka, maskaxda ku hay inaysan lahayn hoy u gaar ah, waana inaad ku sugnaataa Keystone Resort ama hoyga magaalooyinka u dhow illaa 20 daqiiqo oo ka fog aagga barafka, tusaale ahaan Frisco, Silverthorne, Breckenridge iyo Dillon.
La saldhigga loveland aad ayaad ugu dhowdahay magaalada Georgetown ee Colorado, oo ka kooban dooxada Loveland iyo Basaska Loveland labadaba waxay isku xidhaan midba midka kale kaliya safarka baska. The fuula Kuwa ugu daran ayaa ah kuwa ugu badan ee booqda Loveland 400 '' raadka barafka ee aan lahayn wax taraafiko ah iyo dhaadhacyada dhaadheer ee ku qulqulaya fijaannada (bowls) furan. Tani waxay noqon laheyd baraf aad uga badan intaad ka heli laheyd meelaha kale ee barafka lagu ciyaaro ee Colorado.
Iyadoo ay taasi jirto, kuwa bilowga ah ayaa ka dhex hela Loveland Qaar ka mid ah fursadaha in ay yihiin kuwo qabow, sidoo kale la dhaadhaca, laakiin ka yaacday ka yar, gaar ahaan aagga of Dooxada Loveland. Tani caadi ahaan waa mid ka mid ah idaacadaha ugu horreeya ee albaabada loo furo sanadka, maxaa yeelay waxay bixiyaan xilliyo soconaya Oktoobar ilaa May.
Magaaladaan waxaad kaheleysaa guryo kaladuwan oo kaladuwan oo kaladuwan, oo leh xulashooyin hudheelo fudud iyo guryaha is-kaashatada qaaliga ah ee lagu raaxeysto dhamaan raaxada In kasta oo aad dooran karto inaad ka hesho hoy ku habboon magaalada Georgetown lafteeda.
Xusuusnow: Xilliga barafka wuxuu u dhexeeyaa bilaha Nofeembar iyo Abriil, kuwaas oo ah bilaha ugu habboon ee lagu booqdo meelaha loo dalxiis tago ee Colorado. Sidoo kale maskaxda ku hay in barafka uu yahay cayaar khatar ah oo ay tahay inaad qaaddo dhammaan tallaabooyinka amniga ee lagama maarmaanka ah.
Sidii aan ku soo sheegnay bilowgii boggan, labadaba meelaha loo yaqaan 'Arapahoe Barin' iyo 'Loveland resorts' waa labada u muuqda inay furan yihiin in ka badan inta kale sanadka gudihiisa, in kasta oo runtu tahay taas laakiin furitaanka iyo xidhitaanka xilliyada barafka Waxay ku xirnaan doontaa xukunka xarun kasta oo ku xiran xaaladaha cimilada. Badanaa go'aankooda waxaa lagu sameeyaa si sax ah iyadoo lagu saleynayo qadarka iyo heerka barafka dhacay sanadkaas.
WAA MAXAY TALLAALO KALE OO LAGU QABAN KARO COLORADO?
Magaaladaani waa mid qurux badan, oo ay ka buuxaan nashaadaad madadaalo oo hubaal ah inay kaabayaan safarkaaga barafka, gaar ahaan haddii aad la safarto asxaabtaada iyo qoyskaaga. Waad ka faa'iideysan kartaa safarka si aad ugu raaxeysato waxyaabo kale oo aad u nasato jirkaaga xoogaa adrenaline badan oo barafka ka mid ah.
Ka faa'iideyso khibradaha kale ee ka jira magaalada Denver iyo guud ahaan gobolka Colorado. Qaar ka mid ah waxqabadyada ugu fiican ayaa ah:
Matxafka Denver Science and Nature
Snowmobile buuraha dhex socda
Barafka barafka ah ee webiyada qabow
Kayaking ee Confluence Park
Doonta Pedal Washington Park
Degmada RiNo ART
Daabacaadda iyo maqaayadaha
Kulamada isboorti ee kooxaha maxalliga ah
Safarka barafka ee Colorado wuxuu ballan qaadayaa madadaalo ugu badnaan, xorriyadda iyo adrenaline!
Waxa loogu yeero Gobolka Centennial, oo ku yaal galbeedka Mareykanka, wuxuu lahaan karaa dabayl aad u weyn iyadoo ay ugu wacan tahay dhererkiisa iyo xaaladaha cimilada, laakiin inta u dhexeysa bilaha November illaa Abriil waxaa soo gala kumanaan ka mid ah taraafyada raadinaya raadad xilliyadooda kala duwan. iyo jiidashada barafka.
Xusuusnow inaad sameyso safarada barafka waa inaad marwalba aad udiyaar garowdaa heerkulka hoose ee qalabka lagama maarmaanka ah iyo oo leh dharka ku habboon, ha lahaadeen ama ha laga kireysto saldhigyada. Intaas waxaa sii dheer, waa in lagu xisaabtamo in cayaaraha xad dhaafka ah ee barafka ay leeyihiin heer khatar ah oo laga fiirsado. Waa muhiim in markasta si fiican loo wargaliyo, loo diyaar garoobo lana ilaaliyo xaalad feejignaan wanaagsan.
Hadda oo aad wax yar ka ogaato wax ku saabsan khibrada barafka ee Colorado, waxaad dooran kartaa xilliga ugu fiican oo aad u baahato baahiyahaaga. Marka ha ka waaban wax dambe oo khibrad u yeelo safarkan xiisaha leh naftaada!
Soo ogow tartamada isboorti ee ugu fiican iyo dhacdooyinka Yurub iyo adduunka! Waxaa jira kulanno badan oo adduunka ka socda, laga soo bilaabo tan ugu daran uguna asalka ah, tan ugu caansan,